Can Buckwheat ngesifo sikashukela: iresiphi nge-kefir yesifo sikashukela > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Buckwheat yesifo sikashukela mellitus 2: kungenzeka ukuthi udle
I-Buckwheat enesifo sikashukela iyasebenziseka futhi idingeka kakhulu. Inezinto eziningi zokulandela, izakhi kanye namavithamini amaqembu ahlukahlukene. Umkhiqizo uqukethe:
Amavithamini B, P nezinye izinto eziningi eziwusizo.
Yini ukusetshenziswa kwe-buckwheat?
Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi kuma-buckwheat kune-fiber eningi, kanye nama-carbohydrate amade, akakwazi ukubangela ukugxuma ezingeni le-glucose egazini likashukela. Ngokubona lokhu, i-buckwheat ingumkhiqizo wokuqala ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Kuyaphawuleka ukuthi okusanhlamvu kungafakwa ekudleni kwakho cishe nsuku zonke, ngaphandle kokwesaba imiphumela emibi.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-buckwheat ingadliwa ukuqinisa imithambo yegazi, okwenza sikwazi ukugwema i-retinopathy. Lokhu kusiza ngesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwezokwelapha. Futhi kuzobaluleka ukwazi inkomba ye-glycemic yezinsolo.
Phakathi kokunye, i-buckwheat iyakwazi:
Vikela isibindi emiphumeleni yamafutha (ngenxa yokuqukethwe kwezinto ze-lipotropic),
shintsha ngokufanele cishe zonke izinqubo ezihambisana nokugeleza kwegazi.
I-Buckwheat kwisifo sikashukela nayo izoba wusizo kusuka endaweni yokubuka ukuthi inomphumela onenzuzo ekususweni kwe-cholesterol eyeqile egazini likashukela.
Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi ungazikhethela kanjani okusanhlamvu okulungile. Kubaluleke kakhulu ukunaka izinhlobonhlobo ipakeji elithile le-buckwheat elingelazo. Kungcono ukukhetha lezo zinketho ezihlanzwa ngekhwalithi ephezulu kakhulu; i-buckwheat yesifo sikashukela kufanele ibe yalolu hlobo.
Ngaphandle kwalokho, umzimba ngeke ukwazi ukuthola izinto ezidingekayo kuwo, futhi inzuzo yomkhiqizo onjalo izoba mincane kakhulu. I-buckwheat ehlanziwe ilungele kakhulu uhlobo lwashukela lokugcina.
Njengomthetho, i-buckwheat engavunyelwe ithengiswa emashalofini ethu.
I-Buckwheat plus kefir iyisiqinisekiso sempilo
Kunendlela ethandwa futhi edumile yokudla i-buckwheat nge-kefir. Ukulungiselela isidlo esinjalo, asikho isidingo sokushisa-phatha imikhiqizo esetshenzisiwe. Kuyadingeka:
uthele izikhonkwane ze-buckwheat ngamanzi abandayo,
bayeke bakhweze ubusuku obubodwa (okungenani amahora ayi-12).
Kubalulekile! Ungadla okusanhlamvu kuphela ngaleyo kefir, ezoba nokuqukethwe okunamafutha amancane. Ngasikhathi sinye, usawoti kanye nokosa umkhiqizo nezinye izinongo akuvunyelwe ngokuphelele!
Emahoreni angama-24 alandelayo, i-buckwheat kufanele ichithwe yisiguli sikashukela. Azikho izincomo eziqinile eziphathelene nengxenye ye-kefir ne-buckwheat, noma kunjalo, lokhu kokugcina akufanele kudakwe kungabi ngaphezu kwe-1 litre ngosuku.
Odokotela babuye bavumele i-kefir ukuthi ithathelwe indawo nge-yogurt, kodwa ngaphansi kwesimo sokuthi iyogathi izoba namazinga aphansi wamafutha, futhi ngaphandle kwashukela nezinye izihlungi. Akunakwenzeka ukuthi ungasho ukuthi i-buckwheat ene-kefir ye-pancreatic pancreatitis iyikhambi elihle kakhulu, kulabo abanokuphazamiseka kwepancreas.
Kunomthetho oyinhloko wokusebenzisa isitsha. Kucatshangwa ukuthi kukhona i-buckwheat nge-kefir akufanele kungakapheli amahora ama-4 ngaphambi kokulala okusolwayo. Uma umzimba udinga ukudla, khona-ke ungakwazi ukukhokha ingilazi ye-kefir, kodwa hhayi ngaphezu kweyodwa. Ngaphezu kwalokho, i-kefir kufanele ihlanjululwe ngamanzi ahlanziwe ngesilinganiso se-1: 1.
Ukudla kokudla okusekelwe ku-buckwheat ne-kefir kukhiqizwa kusuka ezinsukwini eziyisikhombisa kuya kweziyi-14. Okulandelayo, kufanele uthathe ikhefu.
Iyiphi indlela engcono yokusebenzisa i-buckwheat?
Kunezinketho eziningi zokusebenzisa i-buckwheat ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Kungaba okulandelayo:
Thatha isipuni se-buckwheat emhlabathini ngokucophelela bese usithululela ngengilazi ye-kefir ephansi (njengenketho, ungathatha i-yogurt). Izithako kumele zixube kusihlwa bese zishiyelwa ukufaka ubusuku bonke. Ekuseni, isitsha kufanele sihlukaniswe kabili kube yisidlo esisetshenziselwa ukudla kwasekuseni nakusihlwa,
Ukudla okufana nokolweni kuzosiza ukunciphisa ngokushesha isisindo. Inikezela ngokusetshenziswa kwe-buckwheat entsha eshisiwe enamanzi abilayo. Phuza umkhiqizo onjalo nge-kefir ephansi. Kubalulekile ukwazi ukuthi ukudla okunjalo okuqinile kungathinta impilo yakho. Ngakho-ke, ungazibandakanyi kukho,
I-decoction esekwe emhlabathini i-buckwheat izosiza nomuntu onesifo sikashukela. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha ama-300 ml wamanzi ahlanzwa abandayo kuyo yonke i-30 g yamabele. Ingxube isethelwe eceleni amahora ama-3, bese igcinwa amahora ama-2 kubhavu wesitimu. Kusetshenziswa uketshezi olwedlulele bese kudliwa engxenyeni yengilazi kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
Ungapheka udle ama-noodle asenziwe ekhaya kufulawa le-buckwheat. Ukuze wenze lokhu, lungisa izinkomishi ezi-4 zikafulawa we-buckwheat. Ingathengwa eyenziwe ngomumo esitolo noma eminyangweni ngokudla kwezingane. Ngaphezu kwalokho, ufulawa we-buckwheat ungatholakala ngokugaya ama-grits nge-grinder yekhofi.
Thela ufulawa nge-200 mg wamanzi abilayo bese uqala ukuxova inhlama enzima, okumele ibe yinto efanayo. Uma kwenzeka ukuthi inhlama yome kakhulu noma inamathele, bese uthela inani elincane lamanzi abilayo.
Amabhola akhiwa kusuka kwinhlama ephumayo futhi anikezwe imizuzu engama-30 ukuze agcwaliswe ngoketshezi. Lapho inhlama iba nenala ngokwanele, idluliselwa esimweni samaqebelengwane amancanyana.
Izendlalelo ezihogelwayo zifafazwa ngefulawa phezulu bese zisongwa ngobumnene zibe umqulu, bese zisikwa zibe yimichilo emincane.
Imigqumo ye-noodle eqediwe iqonde, yomiswa ngokucophelela ku-skillet eshisayo ngaphandle kokufaka amafutha. Ngemuva kwalokho, i-pasta enjalo ye-buckwheat ibilisiwe emanzini anosawoti imizuzu engu-10.
Yini i-buckwheat eluhlaza futhi yiziphi izinzuzo zabanesifo sikashukela?
Imakethe yesimanjemanje iphinde inikeze amakhasimende aluhlaza okotshani, okuzoba futhi ithuluzi elihle ekulweni nesifo sikashukela sohlobo 2.
Isici esiyingqayizivele se-buckwheat eluhlaza yikhono lokukhula.
Le nzuzo yenza ukuthi sikwazi ukumila umuthi wangempela oqukethe ama-acid amaningi ama-amino acid namaprotheni.
Lo mkhiqizo uzoba wusizo kwabanesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo lokugula. I-buckwheat eluhlaza ishesha ngokwanele ukuba ikwazi ukudonswa ngumzimba ngasikhathi sinye iphindisela indawo yamaprotheni ezilwane. Inzuzo ebalulekile kuzoba ukungatholakali kumkhiqizo wanoma yiziphi izinto zohlobo lwamakhemikhali, ngokwesibonelo, ama-pesticides kanye nama-GMO.
Izinhlamvu ezinjengalezi zingasetshenziswa ekudleni osekusele ihora selutholile. I-buckwheat ewusizo ewusizo kakhulu esifundeni esimile. Ukusetshenziswa komkhiqizo okunjalo kuzonikeza ithuba hhayi nje lokugcoba umzimba wesifo sikashukela ngezinto eziwusizo, kodwa futhi nokunciphisa amathuba okuba nezifo ezihambisanayo.
I-Buckwheat yesifo sikashukela iyasiza kakhulu
Impela, yebo! I-Buckwheat yesifo sikashukela ingenye yemikhiqizo eyinhloko yokudla! Lokhu okusanhlamvu kwesifo sikashukela kuqukethe i-fiber, kanye nama-carbohydrate, adonswa kancane. Ngenxa yalezi zici, ukusetshenziswa kwe-buckwheat kusifo sikashukela alikhuphi ngokumangazayo izinga loshukela wegazi lesiguli.
Kunezindlela eziningi zokusebenzisa lo mkhiqizo omangalisayo umuntu onesifo sikashukela ongawusebenzisa njengesiyindlela sokuvimbela.
Lolu hlobo lokudla okusanhlamvu lunezinto ezinhlobonhlobo kanye nama-microelements, asiza kakhulu isifo esifana nohlobo 1 noma isifo sikashukela 2. Inqubo equkethwe kuyo, ingena emzimbeni, inomthelela oqinisayo ezindongeni zemithambo yegazi. Izinto zeLipotropic ziyakwazi ukuvikela isibindi sakho emiphumeleni elimazayo yamafutha.
Ngaphezu kwalokho, i-buckwheat kushukela ikhipha i-cholesterol “embi” emzimbeni. Ungumthombo wensimbi, i-calcium, i-boron, ne-zethusi. Lokhu okusanhlamvu kuqukethe amavithamini B1, B2, PP, E, folic acid (B9).
Ukudla kwe-Buckwheat kwesifo sikashukela
Noma yikuphi ukudla okudinga ukulandela noma yisiphi isikhathi kufanele kuvunyelwane nodokotela wakho! Kungemva kokuthola "okuhle" kudokotela nezincomo ezidingekayo, kunengqondo ukuqala izinhlobo ezahlukene zokudla. Ukuthi kuyinkokhelo kashukela wegazi noma ukudla okunenhloso yokunciphisa isisindo.
Buckwheat nge kefir
Uma usebenzisa le ndlela, udinga kuphela i-buckwheat ne-1% kefir. Ngosuku ongasebenzisa ngalo noma iliphi inani, kuyilapho i-kefir - ilitha elilodwa kuphela.
Ebusuku, uthele ukhokho ngamanzi abilayo futhi ugcizelele. Ukusetshenziswa kwamakha izinongo, yebo usawoti ojwayelekile, akunconywa. Ungaguqulela ekudleni kwakho kulezi zinsuku ngengilazi yeyogathi enamafutha amancane.
Ukudla kumele kuqedwe amahora ama-4 ngaphambi kokulala. Ngaphambi kokulala, ungaphuza ingilazi ye-kefir, uyihlambe ngamanzi abilisiwe.
Isikhathi sokudla okunjalo singamaviki ayi-1-2. Ngemuva kwalokho kufanele uthathe ikhefu izinyanga ezingama-1-3.
Kwezinye izimo, i-buckwheat decoction isetshenziselwa ukuvikela isifo sikashukela. Ukuyithola, udinga ukubilisa ama-buckwheat ngenani elikhulu lamanzi bese uhlikihla isisindo esivele umphumela ngenxa ye-gauze ehlanzekile. Kusetshenziswa i-decoction esikhundleni samanzi usuku lonke.
Izakhiwo nokwakheka kwamakhemikhali
Ngokwezinga le-glycemic index (GI - 55), okusanhlamvu kusendaweni ephakathi etafuleni. Okufanayo kusebenza kokuqukethwe kwayo kwekhalori: i-100 g ye-buckwheat iqukethe ama-308 kcal. Kodwa-ke, kunconyelwa imenyu yesifo sikashukela. Ukuqanjwa kubandakanya:
carbohydrate - 57%,
amaprotheni - 13%,
amafutha - 3%,
i-fiber yokudla - 11%,
amanzi - 16%.
Ama-carbohydrate ancishisiwe, i-fiber yokudla ne-protein kwenza kube nokwenzeka ukudala imenyu ehlangabezana nemibandela yokudla nezidingo zomzimba.
I-Croup iqukethe nezinto ezilandelwayo (in% yezidingo zansuku zonke):
abicah - 270%,
ithusi - 64%
i-magnesium - 50%
molybdenum - 49%,
phosphorus - 37%,
i-iron - 37%
i-zinc - 17%,
selenium - 15%,
chromium - 8%
iodine - 2%,
Ezinye zalezi zinto zamakhemikhali zibaluleke kakhulu ezinqubweni ze-metabolic:
abicah bathuthukisa amandla odonga lwemithambo yegazi,
i-manganese ne-magnesium kusiza ukumuncwa kwe-insulin,
I-chromium ithinta ukuvama kwezimpawu zamangqamuzana okufakwa kweglucose, ukuxhumana ne-insulin,
I-zinc ne-iron khuphula umphumela we-chromium,
Okubaluleke kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela, ukuba khona kwe-chromium ku-buckwheat, okunomthelela ekufakweni kwamafutha okungcono, kuvimbela ukuthuthukiswa kokukhuluphala.
Amavithamini we-B nama-PP afakiwe kule nhlanganisela adlala indima ebalulekile ekugayweni kwezinto eziqukethe ushukela: agcina izinga le-glucose ne-cholesterol.
I-Buckwheat yabanesifo sikashukela ingumkhiqizo obalulekile, ukusetshenziswa kwawo okusiza ekuguquleni okuqukethwe ushukela emzimbeni.
I-Croup ingahlukaniswa izinhlobo eziningi, kuya ngendlela yokufaka:
Ingilazi ethosiwe ingumkhiqizo ojwayelekile. Ungumbala onsundu. I-Ground (ngesimo sefulawa) ne-buckwheat engaphekiwe (eluhlaza) ayisetshenziswa kaningi, kepha ilusizo kakhulu futhi iyamukeleka kuhlobo 2 sikashukela.
Izinzuzo nokulimala kwe-buckwheat nge-kefir ekuseni ngesisu esingenalutho nesifo sikashukela:
Inzuzo: Ukuhlanza isitho sokugaya ukudla kusuka kubuthi, kubuye kube ngokomzimba.
Ukulimazeka: amathuba okwanda kwezinqubo zokuvuvukala esibindini namanyikwe, ukuqina kwegazi.
Kwisidlo sasemini, i-pasta ejwayelekile ingashintshwa ngama-noodle a soble kusuka kufulawa we-buckwheat. Ama-noodle anjalo athengiswa esitolo noma ungazenza owakho. Ukuze wenze lokhu, gaya ama-grits agayiwe ku-grinder yekhofi ngefulawa kakolweni ngesilinganiso esingu-2: 1 bese uxove inhlama eshisayo emanzini abilayo. Izingcezu zenhlama emincane zidonswa ngaphandle kwenhlama, zivunyelwe ukuba zome futhi imichilo emincane inqunywe. Lesi sidlo sivela e-cuisine yaseJapan, sinokunambitheka okumnandi okunempilo, kusiza kakhulu ukwedlula isinkwa nepasta eyenziwe ngfulawa kakolweni.
I-Buckwheat porridge enamakhowe namantongomane kufanelekile kokubili ekudleni kwasemini nakusihlwa. Izithako zokupheka:
Fry imifino (ama-cubes) kanye namakhowe (izingcezu) ku-10 ml kawoyela wemifino, imizuzu imizuzu engu-5 kuya kwe-10 emlilweni ophansi. Faka ingilazi yamanzi ashisayo, usawoti, ubilise bese uthele i-buckwheat. Ngomlilo oshisayo, shisa ubilise, unciphise ukushisa bese imizuzu imizuzu engama-20. Fry 2 tbsp. l amantongomane aqhekekile. Fafaza iphalishi eliphekwe nabo.
Ungapheka i-pilwheat pilaf.
Ukuze wenze lokhu, u-anyanisi wemizuzu engu-10 u-anyanisi, ugarlic, izaqathe kanye namakhowe amasha epanini ngaphansi kwesivalo ngaphandle kwamafutha, engeza amanzi amancane. Faka enye ingilazi yotshwala, usawoti, bese uthele i-150 g yamabele. Pheka imizuzu engama-20. Imizuzu emi-5 ngaphambi kokuphela kokupheka uthele inkomishi yesine yewayini elibomvu elomile. Fafaza isidlo eseqediwe nge-dill futhi uhlobise ngezilayi zikatamatisi.
I-buckwheat eluhlaza okotshani
Oluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka, lungamila futhi kudliwe. Imbewu engafakwanga inezakhiwo ezizuzisayo ngenxa yokuntuleka kokulashwa okushisa. Ngokuya ngenani lezinto eziphilayo zochungechunge lwama-amino acid, lidlula ibhali, ukolweni nommbila futhi lisondela emaqanda enkukhu (93% yeqanda BC).
I-Buckwheat akusona isivuno sikakhokho, ngakho-ke zonke izingxenye zesitshalo zicebile ngama-flavonoids. Imbewu ye-Buckwheat iqukethe i-rutin (uvithamini P). Lapho imila, iqoqo le-flavonoids liyanda.
Ama-carbohydrate e-buckwheat eluhlaza aqukethe i-chiro-inosotypes eyehlisa izinga le-glucose egazini. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo unezakhiwo ezilandelayo.
kuqinisa imithambo yegazi
Imbewu eluhlaza ngokuvamile ayibhekelwa ekwelashweni kokushisa, kepha idliwa ngesimo sezithombo.
Ukuze uthole amahlumela, i-buckwheat ithululelwa ngamanzi futhi ivunyelwe ukuvuvukala. Amanzi ayashintshwa, ashiywe izinsuku ezimbili endaweni efudumele. Ngemuva kokuvela kwamahlumela, kungadliwa i-buckwheat, ngemuva kokugeza ngokuphelele ngamanzi ampompo.
Ungadla amahlumela nganoma yisiphi isaladi, okusanhlamvu, imikhiqizo yobisi. Usuku lwanele ukungeza ekudleni izimbotshana ezimbalwa zembewu ekhulayo.
Iqanda libuye lifakwe ngaphambi kokudla. Okokuqala, amahora angu-1-2, bese ugezwa bese ushiye emanzini amanye amahora ayi-10-12.
Ukusetshenziswa ngokweqile kungadala i-gastritis, ngoba umunxa oqukethwe embewini uthukuthelisa isisu. Okusanhlamvu okusobala kuyaphikiswa uma kwenzeka kuba nezinkinga nge-spleen noma kwe-viscosity yegazi ekhuphukile.
Ukusetshenziswa kwe-buckwheat ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 akunakuphikwa. Umkhiqizo ukuvumela ukuthi wehlise ushukela ngaphandle kokudla okuqeda amandla, ukonga amandla. Ukuyisebenzisa njengesengezo, ungashintsha imenyu. I-Buckwheat inomphumela omuhle ekusebenzeni kwamasistimu wokuzivikela womuntu ne-endocrine.
I-Buckwheat ngotshani, hhayi amabele, ayinayo i-gluten futhi ilungele abantu abanezinkinga ngepheshana lesisu. Ufulawa we-Buckwheat unombala omnyama futhi wenziwe ngezinhlamvu ze-buckwheat. Isetshenziselwa ukupheka i-pasta.
I-Buckwheat pasta ihlukaniswa ngokuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni yemifino namavithamini e-B, ekudleni kwabanesifo sikashukela bangaba indawo enhle kakhulu yama-noodle avamile ne-pasta.
Ama-soba noodle enziwa nje nge-buckwheat, abe ne-flavour enempilo, futhi adumile kakhulu ekudleni kwaseJapan. Kungenziwa ekhaya, uma kukhona isithako esiyinhloko - ufulawa we-buckwheat. I-Soba iqukethe cishe ama-amino acid abaluleke ngaphezu kwezikhathi ze-10 kunesinkwa kanye ne-pasta elula, futhi ifaka i-thiamine, i-riboflamin, i-flavonoid nezinye izinto eziningi ezilusizo. Amagremu ayi-100 womkhiqizo aqukethe cishe ama-335 kcal.
Ungathola ufulawa we-buckwheat kusuka ku-buckwheat ejwayelekile - gaya ama-grits kwi-grinder yekhofi noma iprosesa yokudla futhi uyicwilisa kusuka ezinhlayiyeni ezinkulu.
Iresiphi ye-noodle ye-Buckwheat:
Sithatha amagremu ama-500 kafulawa we-buckwheat, u hlanganise ngama-200 amagremu kakolweni.
Thela ingxenye yengilazi yamanzi ashisayo ufulawa, uxove inhlama.
Faka isigamu seglasi lamanzi bese uqhubeka uxova kuze kube bushelelezi.
Sikhipha kulo bese sikukhipha kube yingxenye yehora.
Khipha izingqimba ezondile amabhola enhlama, ufafaze ufulawa phezulu.
Sibeka izingqimba ngaphezulu komunye bese sinquma zibe yimichilo (ama-noodle).
Ukwenza ama-noodle enziwe ekhaya kusuka ku-buckwheat kudinga ukubekezela namandla, ngoba inhlama inzima ukuxova - kuphenduka ibe mncane futhi imile.
Kulula ukuthenga i- “soba” eyenziwe ngomumo esitolo - manje isithengiswa emabhukwini amaningi amakhulu nasezitolo ezinkulu.
I-Buckwheat yohlobo 2 nohlobo lwe-1 sikashukela iyasebenziseka ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphansi kwekhalori nenkomba ephansi ye-glycemic - amayunithi angama-55.
Izinzuzo ze-buckwheat zaziwa isikhathi eside. Kungumthombo we-fiber, amavithamini B, A, K, PP kanye namaminerali. Ngaphezu kwalokho, into eyi-rutin ikhona kulo mkhiqizo eqinisa udonga lwe-vascular. Ngenxa yalokhu kuhlanganiswa, amathoni we-buckwheat uhlelo lwenhliziyo. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo usetshenziselwa ukwehlisa i-cholesterol yegazi, ewusizo kohlobo lweshukela sikashukela. Ngaphezu kwalokho, i-croup ijwayeza ukuqina kwesibindi, iqinise amasosha omzimba, futhi isize ukulwa nokukhuluphala. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi i-buckwheat yehlisela ushukela wegazi, kepha akunjalo. I-Buckwheat ayikhulisi i-glycemia ngenxa yenkomba yayo ephansi ye-glycemic kanye nokuqukethwe okuphansi kwekhalori.
Ungayisebenzisa kanjani i-buckwheat yesifo sikashukela?
Akufanele uhlanganyele ekusetshenzisweni kwalesi okusanhlamvu, ngoba i-buckwheat iqukethe ama-carbohydrate, inani ngokweqile okuholela ekwandeni kokuhlushwa ushukela egazini. Esikhathini sikashukela, kunconyelwa ukuthi ungadli okungaphezu kwezipuni ezingama-6-8 zephalishi ngasikhathi sinye. I-Buckwheat ayinconywa nsuku zonke. Ngesifo sikashukela, kuyasiza ukudla iphalishi le-buckwheat, sebenzisa i-buckwheat nge-kefir, upheke futhi udle ama-noodle we-buckwheat. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukuthi abantu abanesifo sikashukela bapheke umhluzi we-buckwheat, kuvunyelwe nokudla ama-greats aluhlaza okotshani.
Esikhathini sikashukela, i-viscous buckwheat porridge ebilisiwe emanzini ilusizo kakhudlwana futhi ikhalori ephansi. Iphalishi elivulekile lizoba cishe liphindwe kabili kilojoule. Ukulungiselela iphalishi le-buckwheat ejwayelekile, ama-grits kufanele athelwe epanini elinamanzi abandayo (amanzi kufanele abe izikhathi ezingama-2,5 kune-nokunye okufana nokolweni), anosawoti. Letha iphalishi ngamathumba, bese upheka emlilweni ophansi kuze kube yilapho uketshezi luphuma ngokuphelele. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isifo sikashukela asisona isizathu sokupheka iphalishi elilodwa lesikhumba. Kwabanesifo sikashukela, kukhona futhi iresiphi yephunga elimnandi le-buckwheat ngamakhowe:
Ama-gramu ayi-150 wamakhowe we-porcini - amakhowe e-russula noma uju, hlambulula bese ubilisa emanzini abilayo imizuzu engama-20, bese uvumela ukuphola nquma kahle.
Chop u-anyanisi ongu-1, hlanganisa namakhowe, uvumele kancane epanini lokuthosa.
Faka isigamu seglasi le-nokunye okufana nokolweni, upheke imizuzu emi-2, bese ufaka usawoti, uthele amanzi bese upheka kuze kube uqeda.
Lapho ukhonza, ungafafaza ngamakhambi.
Okusanhlamvu okuSteam kulwa kahle ngesisindo esithe xaxa, kepha akulungele ukudla okuhlala njalo kwabanesifo sikashukela.
Ukudla kwe-Buckwheat kusetshenziselwa ukunciphisa ngokushesha isisindo somzimba. Ngokudla okunjalo, okusanhlamvu kufanele kufakwe amanzi abilayo, kufakwe kuze kuvuvukale, noma ungaphikelela ubusuku. Kukhona isidlo esinjalo osidingayo usuku lonke, sihlanza phansi nge-kefir ephansi. Ngokuhambisana, kunconywa ukuthi uphuze amanzi amaningi usuku lonke. Lokhu kudla kunemuva elilodwa - ngokusetshenziswa kwalo isikhathi eside, isimo esivamile singase sibe sibi kakhulu, ikakhulukazi kwiziguli ezinesifo sikashukela mellitus. Ngakho-ke, uma unesifo sikashukela, akufanele usebenzise lolu hlobo lokudla, udinga ukudla kahle nangokulinganisela.
Ama-noodle we-Buckwheat, noma i-soba, njengoba ibizwa eJapan, avunyelwe nesifo sikashukela. Le noodle iqukethe inani elikhulu lama-amino acid namavithamini eqembu B. Ama-noodle anjalo angathengwa esitolo noma uzipheke ngokwakho. Ukuze ulungiselele umcimbi wasekhaya uzodinga:
ufulawa we-buckwheat noma okusanhlamvu komhlaba - izinkomishi ezi-4,
ingilazi yamanzi abilayo.
Thela ufulawa, engeza amanzi, uxove inhlama enamandla. Uma inhlama isomile ngokweqile, engeza amanzi amaningi ukuyenza ifane futhi ibenxe. Yakha amabhola amancane, ushiye isigamu sehora bese uyaphuma. Fafaza amakhekhe atholakele ngefulawa, uwasike abe yimichilo. I-Boba soba ayidluli imizuzu eyi-10.
Kuyasiza nasezigulini ezinesifo sikashukela ukuphuza umhluzi we-buckwheat. Ukwenza lesi siphuzo udinga:
ama-grits omhlabathi athululela amanzi ahluziwe abandayo (300 ml ngamagremu angama-30 grits),
phikelela isiphuzo amahora amathathu,
emva kwalokho, pheka umhluzi kubhavu ovuthayo amahora angu-2,
thatha umhluzi esiswini esingenalutho engxenyeni yengilazi kathathu ngosuku.
Izici eziwusizo zomkhiqizo
Kungenzeka yini ukudla i-buckwheat yesifo sikashukela, kuyasiza kulesi sifo? Lokhu okusanhlamvu kuqukethe ekwakhekeni kwama-microelements amaningi awusizo womzimba. Siqukethe ama-carbohydrate, amaprotheni, amafutha kanye ne-fiber yokudla. Amavithamini aqukethe kuwo asiza ukugcina amazinga evamile eglucose.
Phakathi kwezinto ezilandelwayo, i-selenium ingahlukaniswa, enezakhiwo ze-antioxidant futhi isize ukuvikela ikati kanye ne-atherosclerosis. IZinc ikhulisa amandla omzimba wokumelana nezifo ezithathelwanayo. UManganese uthinta ngqo ukukhiqizwa komzimba kwe-insulin. Ukushoda kwale nto yokulandela umkhondo kuvame ukubangela isifo sikashukela. I-Chromium isiza uhlobo lwashukela lwababili ukulwa noswidi.
Uma i-buckwheat idliwa njalo ngohlobo 2 sikashukela, izindonga zemithambo yegazi ziba namandla. Lo mkhiqizo usiza ukususa i-cholesterol eyingozi emzimbeni, ngaleyo ndlela uvimbele ukukhula kwe-atherossteosis. Kukhona into enoshukela - i-arginine, evusa ama-pancreas ukukhiqiza i-insulin.
I-Buckwheat iyasiza futhi kwabanesifo sikashukela ngoba, ngemuva kokusetshenziswa kwayo, izinga loshukela wegazi likhuphuka ngokungahambisani, kepha ngokushelela. Lokhu kwenzeka ngenxa yefayibha, ebambezela kakhulu inqubo yokuhlukanisa ama-carbohydrate nokufakwa kwawo emathunjini.
I-Buckwheat iyisiraphu sikashukela, isetshenziswa ekudleni ekwelapheni izifo eziningi.
I-Buckwheat enesifo sikashukela ijwayele ukusetshenziselwa ukunciphisa isisindo ngokweqile, ngoba iyikhalori ephansi. Abaningi besifo sikashukela bangaphawula - ngivame ukudla ama-buckwheat futhi angilulami. Lokhu okusanhlamvu kuvunyelwe ukufakwa kwimenyu yeziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus hhayi zohlobo lwesibili kuphela, kodwa nakwezokuqala. Ukudla kuthatha indawo ebalulekile yokunqoba isifo sikashukela, futhi i-buckwheat iyasiza nalokhu.
Kunezindlela eziningi zokupheka zezitsha ze-buckwheat. I-Buckwheat porridge yesifo sikashukela ingaphekwa ngendlela yendabuko, kodwa ungangeza kuyo:
Amakhowe anyanisi, ugarliki kanye no-celery athosiwe ku-oyela yemifino, engeza ama-buckwheat abilisiwe, amanzi amancane kuwo, usawoti ukunambitha kanye ne-stew imizuzu engama-20. Indishi eqediwe ifafazwa ngamantongomane athosiwe.
Ama-noodle amnandi kusuka kufulawa we-buckwheat, ungayithenga isilungele eyenziwe esitolo noma uyipheke ngokwakho. Ufulawa we-Buckwheat ngokwesilinganiso 2: 1 uhlanganiswe nekolweni. Ukusuka kule ngxube ngokufakwa kwamanzi abilayo, inhlama epholile iyagoqwa. Khipha, vumela ukoma futhi uthathe yimichilo emincane. Bapheka ngendlela efanayo nejwayelekile, kepha ama-noodle anjalo enempilo kakhulu kune-pasta futhi ane-flavour enempilo.
Ungapheka kusuka ku-buckwheat ne-pilaf, iresiphi ilula kakhulu. Amakhowe asikiwe, izaqathe, u-anyanisi negalikhi kudluliselwa epanini ngaphandle kokufaka uwoyela imizuzu engaba yishumi. Ngemuva kokufaka okusanhlamvu, izinongo kanye nokwengeza amanzi, zithambisa eminye imizuzu engama-20. Ungahlobisa isidlo esigcwalisiwe ngamatamatisi amasha namakhambi.
I-Buckwheat yenza ama-pancake amnandi. Ukuze ubalungiselele udinga:
shaya amaqanda ama-2
engeza kubo 1 tbsp. l noma uluphi uju
engeza isigamu sengilazi yobisi nengilazi engu-1 kafulawa nge-1 tsp. i-baking powder.
Ngokwehlukana, izinkomishi ezi-2 ze-porridge ebilisiwe zichotshozwa nge-blender, i-apula eligayiwe kanye nama-50 g kawoyela wemifino ayengezelelwa kukho. Ngemuva kwalokho zonke izakhi zihlangana kahle. Ama-fritter anjalo athosiwe epanini lokuthosa elomile.
Futhi uma uthenga ama-flakes we-buckwheat, khona-ke ama-cutlets amnandi atholakala kubo. I-100 g yamakhorali ithululelwa ngamanzi ashisayo bese iphalishi le-viscous liphekwe kubo. Amazambane aluhlaza, u-anyanisi kanye nama-clove ambalwa kagalikhi akhuhlwe ku-grater enhle. Kuzo zonke izithako, inyama egayiwe iyagoqwa, kusikwa ama-cutlets bese kuthosiwa epanini noma kuphekwe ku-boiler kabili.
Ungenza isiphuzo sokuphulukisa esinempilo kusuka kulokhu okusanhlamvu.
Ukuze wenze lokhu, okusanhlamvu kubilisiwe kwinani elikhulu lamanzi, elihlungwa bese lidakwa. I-decoction enjalo ingalungiswa kubhavu wamanzi, ngosuku olungadakwa ngalo uhhafu wengilazi lufika izikhathi ezi-3.
Ezinhlobonhlobo zokudla, iphalishi le-buckwheat lingafakwa nezithelo ezahlukahlukene ezikwazi ukubekezelela ushukela. Le porridge inempilo, kepha awukwazi ukuyidla kakhulu. Umuntu okhonzayo akufanele abambe zingaphezu kwe-10 wezipuni zalesi sidlo. Kulokhu kuphela, i-porridge izoba wusizo.
Ngabe ivelaphi inkolelo yokuthi i-Buckwheat izuzisa kakhulu kwabanesifo sikashukela?
I-Buckwheat inezindawo ezihlukile zokudla okunempilo futhi kufanele kube ukudla okuphoqelekile kuwo wonke umuntu.
Ngakho-ke, i-buckwheat icebile nge-alpha-tocopherol (ngo-100 g - 32.0% wesilinganiso sezinsuku zonke), i-pantothenic acid (24.7%), i-biotin (21.0%), i-Vitamin PP (i-nicotinic acid) (19.5%), choline (14.4%), Vitamin B2 (riboflavin) (14.1%), Vitamin B6 (pyridoxine) (13.8%), Vitamin B1 (thiamine) (11.8%), Vitamin K (phylloquinone) ( 9.2%).
Futhi iqukethe inani elikhulu lama-macro- kanye nama-microelements, njengensimbi, potassium, i-magnesium, ithusi, i-zinc, i-selenium, i-phosphorus, njll.
Noma kunjalo, isakhula. Ngemuva kwakho konke, phakathi kwezinye izinto, i-buckwheat nayo iqukethe ama-carbohydrate, athinta izinga ushukela ngemuva kokudla.
“Kepha kuthiwani nge-arginine?” Uyabuza.
Iqiniso ngukuthi kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2, izinga le-insulin egazini liphakeme kakhulu kunokwejwayelekile. Kepha amaseli womzimba akubona kabi. Lesi simo sibizwa ngokuthi yi-insulin ukumelana. Uma umuntu omelana kakhulu ne-insulin uzama ukubhekana noshukela omningi kuphela nge-buckwheat, cishe akakwazi ukuphumelela. Kepha ezigabeni zokuqala, lapho isifo sikashukela sikhonjwe muva nje futhi uma uzama ukukhipha amaswidi ekudleni kwakho, i-buckwheat ingaba umsizi omuhle.
Noma kunjalo, i-buckwheat buckwheat yehlukile.
Ngabe ibukeka kanjani i-buckwheat?
Sonke sisetshenziselwa okusanhlamvu oku-brown abilisiwe. Yebo, nebhotela. Mmm.
Futhi ababaningi abantu namuhla abazi ukuthi umbala wemvelo we-buckwheat uluhlaza.
Izikhwehlela ze-Buckwheat ziba nsundu ngemuva kokwelashwa okushisa. Kuze kube isikhathi seKhrushchev, i-buckwheat yayigcwele yonke indawo eluhlaza. Kodwa ukuze kwenziwe lula inqubo yokubhoboza izinhlwathi, uNobhala Wokuqala weCPSU Central Committee wanquma ukwethula ukwelashwa kwalo kokuqala kokushisa yonke indawo.
Kwenzekani ekukhiqizeni ngaphambi kokuthi i-buckwheat ingene ebhodweni lakho? Okokuqala, okusanhlamvu kufudunyezwa ku-35-40 ° C, bese kubanjiswa imizuzu engu-5, bese kuphinde kubhakwe amahora ama-4 kuye kwangama-24, omisiwe bese kuthunyelwa ekucekeceni. Ngabe kuyadingeka ukuchaza ukuthi ngemuva kokuthi "ukucubungula" okunjalo izakhiwo eziningi eziwusizo ze-buckwheat zilahlekile?
Ukufana, anginamahloni ngaleli gama, indlela ye-barbaric yokuhluza okusanhlamvu ibonwe nguKhrushchev eMelika. Ngemuva kwalokho amashalofu wesitolo agcwala ama-buckwheat, ajwayelekile kithi sonke, futhi adlula emdaka.
Oluhlaza okwesibhakabhaka, olungafakwanga insimbi, ngentengo ebiza kakhulu kunokucutshungulwa. Lokhu kungenxa yokuthi i-peeling yokusanhlamvu yemvelo inqubo ethatha isikhathi esithe xaxa. Kepha kuyasiza.
I-buckwheat eluhlaza igcina zonke izakhiwo zayo zemvelo. Lokhu kubaluleke kakhulu maqondana nokwakheka kwe-amino acid. Ama-flavonoid aqukethe kuwo aqinisa ama-capillary, i-cholesterol ephansi. A
i-fiber, equkethe i-buckwheat equkethe kuze kube ngu-11% ithuthukisa ukuhamba kwamathumbu futhi isize ukubhekana nokuqunjelwa.
Lokhu kwenza i-buckwheat eluhlaza ibe ngumkhiqizo ofanele hhayi nje ngenxa yesifo esibuthakathaka noma isitho esikhulayo, kodwa futhi nokusetshenziswa kwansuku zonke yisakhamuzi esijwayelekile sezibalo sedolobha elikhulu. Ukucindezelwa njalo nemvelo emibi kwenza buthaka umzimba ungabi mkhulu kunoshukela wegazi ophakeme.
I-buckwheat eluhlaza ingadliwa ngendlela ejwayelekile, ebilisiwe (pheka imizuzu eyi-10-15), noma imila imbewu futhi idle ngezithelo, amajikijolo, ubisi, imifino, amasoso noma engeza amasaladi.
Konke lokhu okungenhla akusho lutho ukuthi udinga ukukhohlwa nge-buckwheat ejwayelekile, enosiba. Ukuyithenga nje, yazi ukuthi ayinanzuzo enkulu yokudla. Futhi, akufanele ibiliswe. Vele uthele amanzi abilayo noma amanzi ashisayo amahora ambalwa. Ukwengeza isikhathi sokufakwa kwayo emathunjini, okusho ukwanda kancane kancane kwe-glycemia ngemuva kokudla, kungcono ukusebenzisa i-buckwheat enjalo ngemifino.
Izinzuzo ze-buckwheat kushukela
I-Buckwheat akuyona nje umkhiqizo olusizo, kepha futhi ingumuthi wemvelo wangempela, ikakhulukazi wohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-2, oluphawulwa ukuphazamiseka kwe-metabolic. Lokhu kungenxa yokuthi ingakwazi ukuziqhayisa ngamanye okusanhlamvu okuqukethe inani elikhulu lamaprotheni asondele kumaprotheni ezilwane, kanye nokuqukethwe kwezinto ezinjalo:
Lizina. Amazinga kashukela akhuphukile kuhlobo 1 nohlobo 2 sikashukela asithinta kabi isimo se-lens yeso, alimaze futhi avuse ukuthuthukiswa kwamabala. I-Lysine in tandem ene-chromium ne-zinc ibambezela le nqubo. Akukhiqizwa emzimbeni womuntu, kepha kuza nokudla kuphela.
I-Nicotinic acid (Vitamin PP). Kuyadingeka ekwelashweni kwesifo sikashukela sohlobo 2, ngoba kumisa ukubhujiswa kwamaseli we-pancreatic, kwenza umsebenzi wawo usebenze futhi kuthuthukise ukwenziwa kwe-insulin, futhi kusiza ukubuyisela ukubekezelelwa kwezicubu kuwo.
USelena. Kuyinto enamandla i-antioxidant esekela ukusebenza kwamasosha omzimba. Ukuntuleka kwalesi sici somkhondo kuthinta ama-pancreas. Lesi sitho sangaphakathi sitholakala kakhulu kule mineral. Ngokuntuleka kwayo, i-atrophies, izinguquko ezingenakuguqulwa ziyenzeka esakhiweni sayo, ngisho nokufa.
I-Zinc Kuyingxenye ye-molecule ye-insulin esiza ukuthuthukisa ukwakheka kwaleli hormone. Kwandisa umsebenzi wokuvikela isikhumba.
Manganese. Kuyadingeka ekwakhekeni kwe-insulin. Ukushoda kwale nto kuvusa ukukhula kwesifo sikashukela.
I-Chrome. Ilawula ushukela wegazi futhi isize ukulwa nesisindo ngokweqile, ngoba yehlisa izifiso zamaswidi.
Amino acid. Babambe iqhaza ekwenziweni kwama-enzyme. Kwabashukela, i-arginine, ekhuthaza ukukhiqizwa kwe-insulin, kubaluleke kakhulu. Amafutha e-Polyunsaturated acid aciphisa izinga le-cholesterol "embi" futhi anciphise nengozi yokuqhamuka ne-atherosclerosis.
IBuckwheat nayo inamafutha ayo emifino ebiza kakhulu, iyinkimbinkimbi yamavithamini A, E, iqembu B - riboflavin, i-pantothenic acid, i-biotin, ne-choline noma i-Vitamin B4 equkethe kuyo kuphela. Kwezinto ezisebenzayo zokulandela umkhondo ezikufanele ukugqamisa i-iron, i-magnesium, iodine, ifosforasi, ithusi ne-calcium.
Lapho uhlola ukukhanga komkhiqizo kwabanesifo sikashukela, kubalulekile ukunaka izici ezimbili ezingeziwe:
Inkomba ye-glycemic ye-buckwheat ingama-50, okungukuthi, ingumkhiqizo ophephile ongangena ngokuphephile ekudleni nsuku zonke (bheka ukuthi hlobo luphi lwamabele ongaba nalo nesifo sikashukela).
I-calorie buckwheat (nge-100 g) ingu-345 kcal. Inothile ngesitashi, ehlehlela phansi kushukela futhi ikhuphule izinga layo egazini, kepha ngakolunye uhlangothi, iqukethe nenani elilinganayo le-fiber. Le micu engancibilikisi ivimbela ukumuncwa ngokushesha kwezakhamzimba, okusho ukuthi awukwazi ukusaba ukugxuma okubukhali kushukela.
Iyiphi i-buckwheat ukukhetha?
I-buckwheat eluhlaza ilusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo. Kuliqiniso, ngentengo kubiza kakhulu kunokujwayelekile.
Umbala wemvelo wokusanhlamvu okusanhlamvu uluhlaza. Emashalofini asezitolo kukhona okusanhlamvu okujwayelekile ngezinhlamvu ezinsundu. Bathola lo mbala ngemuva kokwelashwa okushisa. Kuyiqiniso, kulokhu, iningi lezakhiwo eziwusizo ziyalahleka. Ngakho-ke, uma uhlangana nohlaza okotshani obuluhlaza okotshani, yenza ukukhetha kuye.
Umehluko wayo oyinhloko kusuka ezinhlolweni ezijwayelekile onsundu:
ibanjwa ngokushesha ngumzimba,
yi-analogue ephelele yamaprotheni ezilwane,
zonke izakhiwo ezinhle zigcinwa kuyo,
ukupheka akudingi ukwelashwa okushisa.
Kodwa-ke, akufanele ithathwe - ngokulondolozwa okungafanele noma ukulungiselela, amafomu we-mucus, abangele isisu esidabukisayo. Futhi i-contraindicated ezinganeni nakubantu abanegazi elandayo lokugcwala, izifo zamanqina, i-gastritis.
Iphalishi le-buckwheat eluhlaza
Ngesikhathi, kunconywa ukuthi ungadli isipuni esingaphezu kwezingu-8 zephalishi le-buckwheat. Kufanele ilungiselelwe ngale ndlela:
Ama-groats ayagezwa, agcwaliswa ngamanzi abandayo ukuze ambozwe ngokuphelele ngamanzi.
Shiya amahora amabili.
Amanzi ayakhishwa bese i-buckwheat igcinwa ipholile amahora angama-10. Ngaphambi kokusetshenziswa, iyagezwa.
Isitsha esihle kakhulu nge-buckwheat kanye namakhowe silungiswa kanjena:
Ama-shots, ama-clove kagalikhi kanye nesiqu sika-celery asikiwe kahle, amakhowe anqunywa aba izingcezu noma ama-cubes. Amakhowe asikiwe athatha uhhafu wenkomishi, imifino esele iyengezwa ukunambitha.
Beka yonke into epanini, engeza uwoyela omncane wemifino bese ibila ngokushisa okuphansi imizuzu eyi-10.
Thela 250 ml wamanzi ashisayo, engeza usawoti, ulethe ku-thumba bese uthele i-150 g ye-nokunye okufana nokolweni.
Khulisa ukushisa bese ubilisa futhi, bese unciphisa umlilo ucime imizuzu engama-20.
Izipuni ezintathu zanoma yimaphi amantongomane zithosiwe futhi zifafazwe ngephalishi.
I-Buckwheat enama-mushroom yisitsha esihle kakhulu soshukela kwabanesifo sikashukela. Ilungiswa kanjani, uzobona kuvidiyo elandelayo:
Ukuze uyilungiselele, sebenzisa i-buckwheat eluhlaza, okusanhlamvu okusundu akukwazi ukuqhuma, njengoba kuthosiwe:
Ama-groats agezwa kahle emanzini agobhozayo, afakwa emgqonyeni wengilazi isentimitha eyodwa.
Thela amanzi ukuze amanzi amboze okusanhlamvu ngokuphelele.
Konke kushiyelwa amahora ayi-6, khona-ke amanzi ayakhishwa, i-buckwheat iyagezwa iphinde ithululelwe ngamanzi afudumele.
Imbiza imbozwe ngesivalo noma ngesigaxa bese igcinwa amahora angama-24, ijikisa okusanhlamvu njalo emahoreni ayi-6. Gcina okusanhlamvu okuqhume esiqandisini.
Ngosuku abalungele ukusetshenziswa. Ngaphambi kokusetshenziswa, kufanele agezwe kahle.
Lesi sidlo eseceleni esihle senhlanzi ebilisiwe noma inyama, ungangeza nezinongo kuso.